Iyo dzidzo system muAfghanistan. Rondedzero yezvikoro zvepasi rese muKabul
January 10, 2022 Demi Afuganisitani, chikoro
Kana uri kuronga kutamira kuAfghanistan nemhuri yako kupfuura iwe unofanirwa kutarisa hurongwa hwedzidzo yeAfghanistan. Muchinyorwa chino, tichakurukura nezvechikoro uye dzidzo muAfghanistan. Afghanistan iri pakati penyika dzine
Yakamira sei sisitimu yedzidzo muMalaysia?
January 7, 2022 Demi Marazhiya, chikoro
Iyo UAE Dzidzo System. Zvikoro muUnited Arab Emirates
January 4, 2022 Demi chikoro, Brazil
Iyo Dzidzo System muUAE yakaita kuti dzidzo isungirwe kune vese vana veEmiratis vane makore mashanu zvichikwira, kusanganisira vagari vekunze. Dzidzo yepuraimari uye sekondari muzvikoro zvinopihwa mahara kune yega yega UAE yenyika kusvika pazera re18.